Nhengo dzeparamende kubva kuzvikwata zveMDC dzinoti hadzisi kufara nekunonoka kuri kuita paramende kupedza ongororo nyaya yadziri kupomerwa yekuzvidza mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, apo vakauya kuparamende gore rapfuura.
Nhengo dzeparamende dzeMDC dzairamba kusimuka kana VaMnangagwa vapinda muparamende uye pane dzimwe nguva dzaitadza kuenda kudare apo mutungamiri wenyika anenge arimo sezvo dzichiti hadzicherechedzi hutungamiriri hwavo.
Muna Mbudzi gore rapera, komiti inotungamira mabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee kana kuti SROC yakaumba komiti inotungamirirwa, naVaJonathan Samkange veZanu PF kuti ioongorore nyaya iyi uye kusvika pari zvino komiti iyi haisati yapedza basa rayo.
Munyori mukuru muMDC T iri kufanotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe, VaDouglas Mwonzora, vanove mumwe wevari kuongororwa vaudza Studio 7 vakabvunzurudzwa kare uye havana mhosva yavakapara.
VaMwonzora avo vanove seneta vati vakaudza komiti yaVaSamkange kuti havanganzi vakapara mhosva yekuramba kusimukira VaMnangagwa pavakauuya kudare sezvo VaMnangagwa vakapinda mudare reNational Assembly kwete reseneti.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo, vaudza Studio7 kuti havana zvavanotarisira kubva kukomiti iyi sezvo iine nhengo dzeZanu PF chete.
Vatiwo ongororo iyi haina zvaichabatsira sezvo dzimwe nhengo dzebato ravo dzinodarika makumi maviri dzakatodzingwa muparamende.
VaSamkange vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo ichiri kuenderera mberi uye vachazokwanisa kutaura zvakawanda kana vachinge vatura gwaro ravo kuparamende.
Makomiti ese akaumbwa muchikamu chechipiri muparamende yechipfumbabwe aifanirwa kuti achimira basa pakapera chikamu ichi kuitira kuti paumbwa mamwe makomiti pachikamu chechitatu icho chakaparurwa nemutungamiri wenyika svondo rapfuura.
Asi mutevedzeri wemutauriri weparamende, Amai Tsitsi Gezi, vati makomiti ese emuchikamu chechipiri achaenderera mberi nebasa kudzamara SROC yadoma nhengo itsva dzemakomiti aya.
Zvichakadai muNational Assembly mamboita kupopotedzana mushure mekunge mumiriri weBuhera South, VaJoseph Chinotimba, vati varairidzi vari kuramwa mabasa vari kubhadharwa nemapato anopikisa munyika.
Asi mumiriri weNorton, VaTemba Mliswa, pamwe nemumiri we Kambuzuma, VaVaWillas Madzimure veMDC Alliance, varamba izvi vachiti hakuna murairidzi anotambiriswa nemapato anopikisa.
Mune imwewo nyaya gurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, vakumbira dare reNational Assembly kuti ritambire chikumbiro chedhorobha reVictoria Falls chekuti rive guta.
Dhorobha iri rakanyorera kubazi rezvematunhu muna 2017 kuti rive guta, uye komisheni yakadomwa kuti iongorore nyaya iyi yakabvuma kuti Victoria Falls iitwe guta.
Kana paramende ikatambira chikumbiro ichi, ichanyorera kumutungamiri wenyika kuti vatare zviri pamutemo Victoria Falls seguta.